प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बिषयबारे सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश ! - Rising Dainik
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बिषयबारे सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश !
काठमाडौँ / नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै बहष चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सो बिषयबारे प्रष्ट पारेको छ । आज अदालतले ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेश माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको सर्वोच्च अदालतले वेभसाइट मार्फत जानकारी दिएको छ । अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतलिनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारले लालबहादुर कुँवरले दरपीट गरेका थिए ।
उक्त दरपीटवि’रुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीटको आदेशलाई नै सदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी गराएको हो ।
यस्ता कडा चट्टान रहेको भि’रमा सेनाले खो’ल्यो कालापानी जाने बाटो